दुई-अर्का घरेलु कमेडी "गोल्डन क्याल्फ" (अभिनेता: एस। जेरासिक, जे। ग्रिड, एल कुरुवेले, एस स्टार्कोवा, ई। इस्टस्टाइनेभ) 1968 को पहिलो जाडो महिनाको सुरुवातमा स्क्रीनमा देखा पर्यो, यद्यपि एक फिल्म निर्माण गर्ने विचार एक क्लासिक बन्यो 1962 मा लेखकलाई। लगभग पाँच वर्ष माईल र पेट्रो द्वारा उपन्यास को एक फिल्म संस्करण बनाउन को अनुमति प्राप्त गर्न को लागि उत्पादन निदेशक मिखाइल स्विट्जर द्वारा चलाए गए। यस पटक निर्देशक भविष्यको उत्कृष्ट टुक्राको अवधारणा विकास गर्न र स्क्रिप्टको ड्राफ्ट संस्करण लेख्न पर्याप्त थियो। र अब, यूएसएसआर को नीले स्क्रीन मा6वर्ष पछि, आफ्नो बेहोशी जुलूस "गोल्डन कैल्फ" (फिलिम, 1968) को शुरू गर्यो। प्रीमियर मानिसहरूको मनपर्ने स्थानमा उठेर तुरुन्तै अभिनेताहरू।
फिल्मको कास्टिंग को समयमा, मुख्य भूमिका दुवै उपलब्ध चरण मालिकहरु र नौसिखिया, साना ज्ञात अभिनेताहरु द्वारा खेलेका थिए। गोल्डन बल्फ (1968) व्लादिमीर व्सस्स्की, निकोलाई गिबिन्को, अलेक्जेंडर पोरोहोवस्चोभोव, व्लादिमीर बेसव, जिनोवी वेस्कोकोस्कीको ध्यान आकर्षित भयो। उनी सबैले "ठूलो संयोजक" को स्क्रीनमा घुम्न चाहन्थे। यसको अतिरिक्त, निर्देशक व्यक्तिगत रूपमा नमूना र आकर्षक अभिलेखागार Gomiashvili मा निमन्त्रणा गरे, तर त्यस समयमा कलाकार मस्कोमा पुग्न सकेन। यद्यपि उनले अझै पनि ओस्टाप बेंडरको भूमिका निभाए तापनि पछि - लियोनिद गीडीईको परियोजनामा "12 कुर्सिहरु।"
एक टर्की विषयको छोरा
नतिजाको रूपमा, "गोल्डन क्याल्फ" (अभिनेता, पसलका सहकर्मीहरूले निदेशकको छनौट अनुमोदन गरे) को मुख्य पुरुष भूमिकाको निर्देशकले सर्गे जुरासिकलाई निमन्त्रणा दिए, जसको साथ उनले टेप "टाइम, फरवार्ड!" गरे। मिखाइल श्लिट्जरको छनोट आदर्श थियो, धेरै आलोचक र दर्शकहरूको अनुसार, जुरुसिक ओस्टाप बेंडरको सबैभन्दा राम्रो सिनेमिक अवधारणा हो। यो फिल्म श्वीट्जरमा टर्कीको विषयको पहिलो चलचित्र प्रेमी थियो, त्यसो भए यद्यपि सोभियत नीले स्क्रीनमा पहिलो पटक "महान संयोजक" को छवि उनको समय एजेवीय वसेनिकको समान प्रतिभाशाली कलाकारले ढाकेको थियो। यो फिल्म स्वेभेस्टरको टेलिभिजन शो "द गोल्डन क्याल्फ" को रिलीज 10 वर्ष पहिले थियो। टिभी कार्यक्रममा संलग्न अभिनेताहरू ज्ञात भएनन्, यद्यपि तिनीहरू कम प्रतिभाशाली थिएनन्।
क्रिएटिव सतावटको माध्यमबाट हिड्दै
"गोल्डन क्याल्फ" को शूटिंग प्रक्रिया पछि पूरा गरे, अभिनेताहरुले एक महत्वपूर्ण निराशा अनुभव गरे। तथ्य यह है कि राज्य समिति को सेंसरशिप बार-बार फिल्म "संशोधन के लिए" लौट आए। लेखक टेपको समग्र वातावरण को संरक्षण गर्न प्रयास गर्दै, हानिमा थिए, समय-समय बाट महत्वपूर्ण एपिसोड हटाउँदै। त्यसैले, उदाहरणका लागि, सत्तारूढ शीर्षक "क्रो स्लोबोदका" अन्तर्गत एपिसोड अभिनेता लुकीमिनको साथ अनातोली पापाभोभ द्वारा प्रदर्शन गरिएको थियो । सर्वसाधारण सेन्सरहरूको विचारमा, उनले पनि यो साजिशलाई तान्यो। यस एपिसोडको साथमा एक फिल्मले मोरङमा डुब्न सकेन, यो ध्यान नदेजाडा युरेवना कर्ताव, पापावोभ विधवा द्वारा संरक्षित भएको थियो। पहिलो पटक यो महान कलाकारको स्मृतिको साँझमा 1 992मा टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको थियो। साथै, अन्तिम एपिसोड पुरा तरिकाले पुन: फेरिएको थियो र ग्याँस आश्रयमा व्याख्याता-स्पीकरको भाषणको स्कोर थियो। चलचित्रको अभिनेता "गोल्डन क्याल्फ" ले हरेक प्रेरणाको बिना सबै निर्देशकलाई समर्थन गरे।
अभिनेताहरु को शामिल
Panikovsky को भूमिका रोलन बाइकोव र जर्ज विट्सिन को दावा गरे, तर चरित्र Zinovy Gerdt मा गए। अभिनेता, छविमा काम गर्दै, उनीहरूलाई मानवीकरण गर्न प्रत्येक सम्भव तरिकामा प्रयास गरे। एल्फ र पेत्रोभको साहित्यिक नायक गन्दा र हास्यास्पद थियो, ग्रिडले अरूलाई देखाउन चाहान्यो - छान्ने र हास्यास्पद। उनले प्यानिकोभोकीलाई जीवन र एक धेरै नै अकेला व्यक्तिलाई पूर्णतया अनुचित माने, कमजोर, कुनै पनि गम्भीर चोट ल्याएनन्। अभिनेताले नायकलाई मध्यस्थ, पागल, व्यभिचारी युवकको साथ दर्शकको अदालतमा प्रस्तुत गर्यो।
लियोनिरा कुरोवेलो, गोल्डन क्याल्फमा अभिनेता, Wii मा हम्मा ब्रुटाको भूमिका निभाईयो, जो नजिकै नजिकै पर्वमा गोली मारिएको थियो, त्यसैले उनी अक्सर एक र अर्को चलचित्र शूटिंगको लागि ढिलाइ भयो।
श्राला बागुनोभको भूमिकाको लागि अन्य दावेदारहरूमध्ये विचस्लाव नेभिन्नी आफैं थिए, र एवर्जी लियोनिभले एअर कुरानोको भूमिका निवारण गरे।
"गोल्डन क्याल्फ" (फिलिम, 1968) खेलाडीहरूमा भाग लिने अभिनेताहरू, अनौपचारिक निर्देशकको अवधारणाको कारण याद गरे। धेरै माइकल अब्रामोविचको अनुसार, उनले बिल्कुल ब्रान्ड गर्न चाहँदैनन् र आफ्नो मुख्य पात्रलाई अनावश्यक प्रकाशमा बेवास्ता गर्न चाहँदैनन्। यसको विपरीत, लेखकले ओस्टाप स्मार्ट, आकर्षक, ऊर्जावान र करिबमेटिक देखाउनुभयो, जसले दर्शकहरूलाई सहानुभूति दिलाउँछ। यो यस्तो प्रकारको नायक थियो जसले ब्रोकरलाई घृणा गर्यो, उसलाई उनको साथ सबै बाटो जान्न र अन्तमा एक मृत अन्त्यको लागि पर्खिरहेका थिए भनेर सुनिश्चित गर्न निमन्त्रणा गरे। केवल यस तरिकाले दर्शकलाई बुझ्नको लागि कि नायकको जीवन बर्बाद भएको थियो - र यो मुख्य त्रासदी हो। कलात्मक परिषदका सेंसरले यस्तो लेखकको खोजको प्रशंसा गरेन र सोवियत समाजसँगको टकरावमा बेन्डर र उनको हारको नैतिक पतनलाई जोड दिनको लागि एक चलचित्रको चलचित्रको माग गर्यो। निर्देशक अपमानजनक थियो, तर भाग मा पालन गर्न को लागि थियो, केहि दृश्य वास्तव मा फेरि गोली मार दिए, तर जानबूझकर बुरा, जानबूझकर झूठी।
इथान हंट - रेनकोट र डगरको आधुनिक नाइट
अर्मेनियाई चलचित्र: अतीत र वर्तमान
किम सुङ्ग-हेई: दक्षिण कोरियाली टिभी श्रृंखला तारा
Hemodialysis - यो प्रक्रिया के हो?
सबै भन्दा प्रामाणिक loukostery एशिया
वक्ताओं को प्राविधिक विशेषताहरु
Stiga (हिउँ-बिरालोहरु) को समीक्षा। हिउँ-बिरालोहरु Stiga हिउँ धावक Flames, Stiga बाइक हिउँ किक: समीक्षा
उल्लेखनीय व्यक्तित्व - उल्लेखनीय क्षमता एक व्यक्ति। शब्द को अर्थ "असाधारण"
त्रुटि «विन्डोज - कुनै डिस्क"
दिन को कुनै पनि समय स्केट्स मा मास्को मा कहाँ जाने?
बिजुली बयलर "Scorpio": समीक्षा, प्रयोगकर्ता पुस्तिका
चिकन एक मलाईदार सस मा नाजुक पास्ता